October 2011 ~ အနုပညာအိမ်လေး
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com. Monday, October 31, 2011
ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် မှ ကျေးရွာပေါင်း ၂၅ ရွာနှင့် ရေးဘေးဒုက္ခသည် နှစ်သောင်းနီးပါး အရေးပေါ်အကူအညီများလို
အပ်နေကြာင်းသိရှိရ။ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ ရက်ကျော် ညသန်းခေါင်ယံ (အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က) ကန်တွင်းရွာ
နံဘေးရှိ ယောချောင်းမှ ရေများဒရဟော စီးဝင်လာကာ ရွာမြောက်ပိုင်းရှိ အိမ်များ၏ ၁၅ ပေ နီးပါး အမြင့်ရှိ
သော အိမ်ခေါင်မိုးများ နစ်မြုတ်သည့်အထိ ရေကြီးသွားခဲ့ကြောင်း အသက် ၂ နှစ်အရွယ် သားနှင့်အတူ ဆန် ၃ ပြည်နှင့်ဆီအနဲငယ် ရရှိရေးအတွက် ရိက္ခာစာင့်ဆိုင်းနေသူ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး မဝင်းသီ
တာ ဆိုသူ အမျိုးသမီးကပြောပြပါသည်။
ရေဘေးသင့်မှု့များကို လာရောက်လှူဒါန်းမည့် ချာက်မြို့မှ အလှူရှင်များထံမှ ဆန်၊ ဆီ နှင့် အသုံးအဆောင်
အချို့ကို အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က သူမအပါအဝင် ကန်ချောင်းကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများ စောင့်
ဆိုင်းနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတောမြို့နယ်အနီးမှ ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်ခဲ့သော
O2B မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် ပခုက္ကူ၊ ဆိပ်ဖြူ၊ ပေါက် စသည့်မြို့နယ်များမှ ရာနှင့်ချီသော ကျေးရွာများမှ အိမ်
ခြေပေါင်းများစွာကို ယော၊ ရွှေချောင်း၊ချစ်ချောင်း၊ စသည့်ချောင်းများဆီက ရေများလျှံဝင်လာကာ ရေတိုက်
အိုးအိမ်များ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးကာ စာသောက်ရိက္ခာအခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး၊ အရေးပေါ် အကူ
အညီများ အမြန်လိုအပ်နေကြောင်းသိရပါသည်၊ ရေကြီးမှု့ကြောင့် ကျေးရွာပေါင်း ၂၅ ရွာမှ အိမ်ထောင်စု ၃၄၆၀၀ ကျော်၊ လူဦးရေ ၁၉၃၇၁ ဦးရေဘေးသင့်ခဲ့သည်။ အိမ်ခြေပေါင်း ၃၆၅၉ အိမ် ရေလွှမ်းမိုး ပျက်စီးခဲ့
သည်။ ထိုအထဲမှ အဆိုးဆုံးမှာ အိမ်ခြေ ၁၂၀၀ ကျော် ရေစီးနှင့်အတူ မျှောပါသွားခဲ့သည်။မြို့နယ် အုပ်ချုပ်
ရေးမှူးရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်တွင် ရေဘေးသင့်မှု့ကြာင့် လူ ၁၁ ဦးသေဆံးခဲ့ကြောင်းသိရှိ
ရပြီး၊ပျောက်ဆုံးနေသူနှင့် သေဆုံးသူစာရင်း အတိအကျ မရသေးကြောင်းသိရပါသည်။ဒေသခံများအဆိုအရ
ပျောက်ဆုံးသူနှင့် သေဆူံးသူဦးရေမှာ ထိုထက်ပိုနှိုင်ကြောင်း ဒေသခံများနှင့် တာဝန်ရှိသူအချို့က ပြောပြပါ
သည်။ ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်မှာ ရေဘေးဒါဏ်ကို အဆိုးရွားဆုံး ခံခဲ့ရသည်ဟုလည်း သိရပါသည်။
ပခုက္ကူခရိုင်မှာ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သောစာရင်းများအရ သေဆုံးသူ ၁၀၆ ဦးရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အပူပိုင်းမုန်
တိုင်းငယ် O2B ကြောင့် လူသေဆုံးမှု့နှင့် အိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု့မှာ၊ ယခင်နှစ်က တိုက်ခတ်ခဲ့သော ဂီရီ
ဆိုက်ကလုန်း မုန်တိုင်းထက် ပို၍သေဆုံးမှု့များနေသည်။
ဒေသအာဏာပိုင်များက အကူအညီပေးနေသော်လည်း အကူအညီများ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ လမ်းများ
ပျက်စီး၍ အကူအညီမရောက်နှိုင်သောရွာအချို့တွင် ရေလွှမ်းအပြီး ၃ ရက်အထိ အစာမစားရသူများပင်ရှိ
ကြောင်းသိရပါသည်၊ ရေဘေးဒုက္ခသည်များကို ချောက်၊ ဆိပ်ဖြူ မြို့ပေါ်နှင့် ပါတ်ဝန်းကျင် ဒေသခံများက
ကူညီပေးနေပြီး၊ အောက်တိုဘာလ ၂၃ နေ့အထိတွင် ရန်ကုန်မှ ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလာ၊ ရဲတိုက် ဖေါင်ဒေရှင်း လူမှူ့ကူညီရေးအဖွဲ့ နှင့် ကျန် လူမှူ့ကူညီရေးအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခန်သာ ရောက်လာနှိုင်သေးကြောင်း
သိရသည်။ ဒေသခံတဦးက ပြောဆိုရာတွင် (ရေဒီယိုက ကြေငြာတာက တစ်နာရီ မိုင် ၆၀ ဆိုတော့ ဒီဘက်မှာ အေးအေး
ဆေးဆေးဘဲထင်ပြီး ဘာမှ ကြိုတင် ရွှေ့ပြောင်းတာတွေမလုပ်ထားဘူးလေ၊ မနှစ်ကလည်း ဖြစ်ဘူးထားတော့
ဒီလောက်ကြီး ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မထားဘူး။ ဒီလိုမျိုးအဖြစ် တခါမှ မကြုံခဲ့ဘူးပါဘူး) ဟုအရှေ့ကန်
တွင်းရွာနေ အသက် ၆၇ အရွယ်ရှိ ဒေါ်ဝိုင်းကြည်က ပြောပြပါသည်။
ဆိပ်ဖြူရွာက ရွာသားတဦးက ( အရင်နှစ်တွေတုံးက ရွာထဲကို ပေါင်လည်လောက်အထိဘဲ ဝင်တာ၊ ဒီနှစ်က
တော့ဗျာ မပြောပါနဲ့တော့။ ရေဝင်တာမှ ရက်စက်တယ်။ ဟောဟို အိမ်ခေါင်မိုးအထိ မြုပ်တယ်)ဟု ၁၅ ပေ
ခန်းအကွာရှိ သဲနုန်းများ တငိကျန်နေသော အိမ်တလုံးကို လက်ညိုးထိုးကာပြောပြသည်။
ဆိပ်ဖြူမြိုနယ် ကိုးကျေးရွာမှ ရွာသားတဦးကလည်း ( ကျနော်တို့ရွာကတော့ဗျာရုတ်တရက် ရေစီးဝင်လာ
လိုက်တာ ဘုန်းကြီးကျောင်းရော ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ပါ ရေထဲမျှောပါသွားတယ်) ဟုပြောပြပါသည်။
ထို ကိုးရွာ ဆိုသောရွာသည် အိမ်ခြေ ၉၀ ရှိသည့်အနက် အိမ် ၆ လုံးသာကျန်ရစ်ကာ ကျန်အိမ်များအားလုံး
ရေစီးထဲမျှောပါသွားခဲ့သည်။ ယခင်က မိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ခဲ့ရသော အညာတခွင်မှာ ၂၁ ရာစုနှစ်တွင် ရာသီ
ဥတု ပြောင်းလဲမှု့ကြောင့် ရေဘေးကြုံနေရပြီဖြစ်သည်။ ယခု အပူပိုင်းမုန်တိုင်းကြောင့် မုန်တိုင်းမှတ်တမ်းတွင်
စာရင်းဝင်သည့်အထိ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း မိုးလေဝသ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်က မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားပါ
သည်။ရေလွှမ်းခဲ့သော အညာရွာများ၏ လမ်းနှင့် လူနေအိမ်များမှာ သဲနုန်းများ ဖုန်းလွှမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ယနေ့
အချိန်အထိ ထိုဒေသမှ ပြည်သူများအတွက် အခိုအပ်ဆုံးမှာ စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
7 DAYS NEWS JORNAL
THURSDAY, 01 NOVEMBER 2011.
ကုလ သမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်၏ အထူးအကြံပေး ပုဂ္ဂလ် ဗီဂျေးနမ်းဘီယာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ။
ကုလ သမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်၏ အထူးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် ဗီဂျေးနမ်ဘီယာ သည် အောက်တိုဘာလ ၃၁
ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ မစ္စတာ ဗီဂျေးနမ်ဘီယာ ရောက်ရှိလာခြင်းကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံး ပြန်ကြားရေးဌာန
ထိုသို့ပြောကြားခဲ့ရာတွင် ဗီဂျေးနမ်ဘီယာ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်သည် ၅ ရက်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှစပြီး ကုလသမ၈္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်
စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဗီေ၈ျးနမ်ဘီယာသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက မြန်မာနိုင်
ငံသို့ ပဌမဆုံးလာရောက်ခဲ့ပြီး၊ ၂၁၀၀ ခုနှစ် မေလတွင် ဒုတိယအကြိမ် လာရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့လာစဉ်
က နိုင်ငံတော် သမ္မတ အကြံပေးအဖွဲ့၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်၊ နိုင်ငံ
ရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးမှု့
များ ပြုလုပ်ကာ သုံးရက်ကြာ လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အိန္ဒိယ နွယ်ဖွားဖြစ်သူ မစ္စတာ ဗီဂျေးနမ်ဘီယာသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှ စတင်ပြီး၊ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း၏ ရုံးအဖွဲ့မှူးအဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်
ဇန်နဝါရီလတွင် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိ်ုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ
အီဘရာဟင်မ်ဂမ်ဘာရီ ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ပြီးနောက် သူ၏နေရာကို ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်၊ မစ္စတာ
ရာဇာလီ အစ္စမေးလ် နှင့် မစ္စတာအီဘရာဟင်မ်ဂမ်ဘာရီ တို့က တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးပြီး မစ္စတာ ဗီဂျေး
နမ်ဘီယာက တတိယမြောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးအပါတ်အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.Marty
Natalegawa ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှာ်အဖွဲ့က ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံ ဥက္ကဌအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ တာဝန်
ထမ်းဆောင်ရေးနှင့်ပါတ်သက်ပြီး အချက်အလက်များ ရှာဖွေလေ့လာရန် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နှင့် ၂၅ ရက်တို့တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိ်ုယ်စားလှယ်
Mr.Drek Mitchell က မြန်မာနိုင်ငံသို့ အချိန်နှစ်လအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် အဖြစ် လာရောက်ခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် ၄င်း Mr.Drek Mitchell သည် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တတိယ မြောက် ခရီးစဉ်
အဖြစ် လာရောက်ရန်ရှိနေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး အတည်ပြုချက် မရရှိသေးပေ၊ တတိယ
အကြိမ်လာရောက်မည့် ၄င်း၏ ခရီးစဉ်တွင် လေးရက်ကြာနေထိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သူနှင့်အတူ အမေရိကန် လူ့အ
ခွင့်အရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.Micheal Posner လည်း လိုက်ပါ
လာမည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
MONDAY , 31 OCTOBER 2011.
ကရင်သက္ကရဇ် ၂၇၅၁ ခုနှစ် ကရင်အမျိုးသား နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် သုံးရက်ကြာ ကျင်းပမည်။
၂၇၅၁ ခုနှစ် ကရင့် အမျိုးသား နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်မှ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်
မြို့၊ အင်းစိနမြို့နယ် မဟာဆေးဝင်္ဂဘာ အာလိန်ငါးဆင့်ကျောင်းနှင့်၊ မြန်မာမီးရထား ဘော်လုံးကွင်းတို့တွင်ကျင်း
ပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကရင်အမျိုးသား နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မီတီ(ရန်ကုန်)က သတင်း
အဆိုပါ ၂၇၅၁ ခုနှစ် ကရင့်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှစ၍
သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ပြခန်းကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ကရင့်ရိုးရာဒုံးယိမ်းအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမည်
ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီ တိတိတွင်၊ ကရင့်အမျိုးသားအလံတော်အား အလေးပြု
ခြင်းနှင့် ဟောပြောပွဲ၊ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲ၊အားကစား၊အကပြိုင်ပွဲ နှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ။ ညနေပိုင်းတွင် ရိုးရာ
အက တေးသီချင်းများဖြင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်သွာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် အားကစား
ပွဲ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ၊ အကပြိုင်ပွဲများအတွက် ဆုပေးချီးမြင့်ပွဲ အစီအစဉ်များ၊ ယာဉ်ကျေးမှု့နှင့် သတင်းပြန်ကြားရေး
ပြခန်းများ ပြသခြင်းနှင့် ညပိုင်းတွင် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ တင်ဆက်သွားရန် အထူးစီစဉ်ထားကြောင်း
The Myanmar Post Journal.
ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု့ကြောင့် အန္တ့ရယ်ရှိနှိုင်ခြေ အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံများ တွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်။
ရာသီဥတု ပြောင်းလဲလာမှု့ကြောင့် အန္တရယ် ရှိနှိုင်ခြေ အများဆုံး နိုင်ငံများထဲတွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင်
အရှေ့တောင်အာရှ ငါးနိုင်ငံ ပါဝင်နေကြောင်း ဗြိတိတန်ရှိ ဘေးအန္တရယ် လေ့လာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော
Mapleerop နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၃ နိုင်ငံကို လေ့လာ အဆင့်ခွဲခြားပေးသည့် ဇယားတွင် ဖေါ်ပြပါရှိကြောင်း သိရ
Sunday , 30 October. 2011.
ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမအတွင်း ဗုံးတွေ့ရှိသည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် အနီးပါတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြတ်သန်းသွားလာမှု့ကို သုံးနာရီကျော်ကြာ ကန့်သတ်ခဲ့။
အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ အတွင်းရှိ ဆင်ဝင်အောက်တွင် ဗုံးတွေ့ရှိ
သည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် မြို့တော်ခန်းမရှေ့ အနီးပါတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြတ်သန်းသွားလာမှု့
များကို သုံးနာရီကျော်ကြာ ကန့်သတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ မျက်နှာစာရှိမဟာဗန္ဒုလလမ်း
ပေါ်နှင့် ဆူးလေဘုရားလမ်းထောင့်တွင် ညနေ ၆နာရီ အချိန်ခန့်မှစတင်၍ ယာဉ်ထိန်းနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကာရံ
ကာ၊ လူများ၊ မော်တော်ယာဉ်များ ဖြတ်သန်းသွားလာမှု့ကို တားမြစ်ကန့်သတ်ခဲ့ကြောင်း အနီးပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ မျက်မြင်တွေ့ရှိ သူများက ဆိုပါသည်။
( ညနေ ၆ နာရီကျော် လောက်ကတည်းက မြို့တော် ခန်းမရှေ့နဲ့ ဘေးနေရာအချို့မှာ ရဲတွေ ကာရံထားပြီး
လမ်းပိတ် လိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပထမ ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး။ ဈေးရောင်းတဲ့ဘက်ကိုဘဲ အာရုံရောက်
နေတယ်။ ဒါနဲ့ မေးကြည့်လိုက်တော့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ဆင်ဝင်အောက်မှာ ဗုံးတွေ့လို့ လမ်းပိတ်ထားလိုက်
ပြီး မြို့တော်ခန်းမ ခြံဝန်းထဲမှာလည်း လူတွေအများကြီးဘဲ ရှာဖွေမှု့တွေလုပ်နေတာကို လှမ်းတွေ့နေရတယ်။ ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက်မှာတော့ မြို့တော်ခန်းမထဲက ပေါက်ကွဲသံကြီးတခု ကြားလိုက်ရတယ်။ ကြားရတဲ့
အသံက ကားဘီးပေါက်တဲ့အသံလိုဘဲ။ အရမ်းအပြင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ ဟုမြို့တော်ခန်းမ အနီးတွင် ဈေးရောင်း
နေသူတဦးက သူ၏ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြခဲ့သည်။
ထို့နောက် ည ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် မြို့တော်ခန်းမရှေ့အနီးသို့ မီးသတ်ကား နှစ်စင်း ရောက်ရှိလာပြီး ည ၈ နာရီ ၃၅ ခန့်တွင် သဲများတင်ဆောင်လာသည့် ကားတစီးကိုလည်းတွေ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများက
( ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ်လောက်မှာ မီးသတ်ကား နှစ်စီးလာတယ်။ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ မီးသတ်ရင် ဝတ်တဲ့ ဝတ်စုံတွေ ဝတ်ထားပါတယ်။နောက် ၁၀ မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ သဲတွေတင်လာတဲ့ကား တစ်စီးခန်း
မထဲကို ဝင်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီမှာ သဲအိပ်တွေချပြီး ဖို့နေတာကို မြင်နေရတယ်။ ည ၉ နာရီ ၅ မိနစ်
လောက်မှာတော့ နောက်ထပ် ပေါက်ကွဲသံ တစ်ခု ထပ်ကြားလိုက်ရတယ်။အခုပေါက်ကွဲသံကတော့ နဲနဲ
ပြင်းတယ်။ ဆူးလေဘုရားလမ်းမှာ ရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တောင်မှ နဲနဲ ခါသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်) ဟု ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့သူတဦးက ပြောပြပါသည်။
( မြို့တော်ခန်းမထဲမှာ ဗုံးကို မပေါက်ကွဲခင်ကထဲက တွေ့ခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ
သူတွေက ရှာဖွေမှု့တွေ ပြုလုပ်ပြီး ဗုံးတွေကို အန္တရ်ာမရှိအောင် ဖေါက်ခွဲခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်) ဟု မြို့တော်
ခန်းမအနီးတွင် နေထိုင်သူ တဦးကပြောပါသည်။
ည ၉ နာရီ ခွဲ ခန့်တွင် ပေါက်ကွဲစေနှိုင်မှု့နှင့်ပါတ်သက်၍ အန္တရယ်ကင်းရှင်းသည်ဟု သတ်မှတ်လိုက်ပြီး
နောက် အနီးပါတ်ဝန်းကျင်တွင် လူနှင့် ယာဉ်မျာကို ပြန်လည်ဖြတ်သန်းခွင့် ပြုပေးလိုက်ကြောင်းကိုလည်း
အနီးပါတ်ဝန်းကျင်တွင် သွားလာနေသူများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ စတုတ္တအကြိမ် တွေ့ဆုံ၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသင့်သူများကိစ္စနှင့် စီးပွားရေး၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု့အတွက် အရေးပါသော ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရ။
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့မှာ စတုတ္တ
အကြိမ်မြောက်အဖြစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်အထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ
စိမ်းလဲ့ကန်သာ ဧည့်ဂေဟာတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးမှု့အပြီးတွင် သတင်းမီဒီယာများ
နှင့်တွေ့ဆုံကာ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
( ယခင်က ဆွေးနွေးမှု့များအပေါ် နိုင်ငံတော်က လိုအပ်သည်များ၊ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်အခြေအ
နေ၊တိုင်းပြည် စီးပွားရေး၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက်၊ လွပ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ခွင့်၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်
ခွင့် ရရှိရေးနှင့် လွပ်လပ်စွာ ငွေကြေးလည်ပတ်သုံးစွဲခွင့်ရရှိရေးတို့၏ အရေးကြီးမှု့နှင့်ပါတ်သက်၍ အမြင်ချင်း
ဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်း
ရေး ရရှိရန် နိုင်ငံတော်က ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု့များ၊ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု့ အခြေအနေနှင့် လွပ်ငြိမ်းချမ်းသာ
ခွင့် ပေးသင့်သူများကိစ္စကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲကြပါသည်။ တွေဆုံဆွေးနွေးမှု့မျာကို ဆက်လက်ပြုလုပ်သွား
ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်) ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ထို့နောက် သတင်းထောက်များကို မေးခွန်း ၃ ခု မေးမြန်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ပထမဆုံးမေးခွန်းကို၊ရိုက်တာ သတင်း
ဌာနမှ ဦးအောင်လှထွန်းက မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ (လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းမှာ မပြုသဘော
ဆောင်တဲ့ တိုးတက်မှု့တွေ မကြာသေးခင်က တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအချို့
လွှတ်ပေးတာ၊ The labour union ဖွဲ့ခွင့်ပေးတာ၊ဆန္ဒပြခွင့်ပေးတာ၊ နောက်ဆုံးကတော့ ပါတီမှတ်ပုံတင် ဥပဒေပေါ့။ ဒီအရာတွေက NLD ပါတီ ပြန်မှတ်ပုံတင်ဘို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်ပါပြီ
လား) ဟုမေးမြန်းချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
( NLD ပါတီ ပြန်ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စဟာ ဥပဒေအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီဥပဒေ
အတည်ပြုပြီးတော့ ထွက်လာတဲ့အထိ ကျမတို့ စောင့်ပြီးမှ ပြောနှိုင်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့က ဒီဥပဒေ
ထွက်လာပြီ ဆိုလို့ရှိရင် အစည်းအဝေးခေါ်ရမှာပေါ့၊ ဒါ ကျမတို့ရဲ့ ပါတီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အစည်းအ
ဝေး ခေါ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချပါလိမ့်မယ်)ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
အဆာဟိရှင်ဘွန်း သတင်းစာမှ ဦးတင်မောင်ဝင်းက ( ဝန်ကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့တာလည်း
လေးကြိမ်ရှိတာ သိရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတာတွေကို အများအားဖြင့် သိရပါ
တယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်နေရာတွေမှာပေါ့နော်။ နည်းနည်း အသေးစိတ် သိလို့ရမယ်ဆိုရင် သ်ိချင်တာလေး
တွေရှိပါတယ်) ဟု မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
ထိုမေးခွန်းကို ဦးအောင်ကြည်က ( ကျွန်တော်တို့ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ သတင်းထုတ်
ပြန်ချက်လေးရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု့ လုပ်ငန်းစဉ်မှာပါမက
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှု့ရေးနယ်ပယ် အသီးသီးမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သဘော
တူထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥစ္စာ တော်တော်လေး ပြည့်စုံ လုံလောက်တဲ့ အဖြေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်
မျှော်လင့်ပါတယ်) ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ်မှ ကိုကျော်စွာမင်း မေးသော ( အခု ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု့မှာ ဦးအောင်ကြည်နဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ဘို့ကိစ္စရယ်၊ နောက်တခါ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား
တွေ ဆက်လက် လွှတ်ပေးဘို့ကိစ္စရယ်၊ နောက်တခါ အန်တီစု အနေနဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံ
ဘို့ ကိစ္စရပ်တွေကိုရော ဆွေးနွေးခဲ့တာ ရှိပါသလား) ဆိုသောမေးခွန်းကိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
(ကျမတို့ ဒီကိစ္စအားလုံးကို ဆွေးနွေးပါတယ်။ အမြဲဘဲ တွေ့တိုင်းလည်း ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးပါတယ်။ ဘာလို့
လဲဆိုရင် ကျမတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကိစ္စမို့ပါ) ဟုဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ထပ်မံလွှတ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ မရှိ် ဟူသော ဦးအောင်လှထွန်း၏ မေးခွန်းကို ဦးအောင်ကြည်က ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် ( ကျွန်တော်တို့က လုပ်ငန်းစဉ်တခု လုပ်တဲ့အခါမှာ တစ်လှမ်း
ပြီးတစ်လှမ်းဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ သဘာဝ ရှိပါတယ်။ ဒါ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘဲ။ ကျွန်တော်တို့က စုန်လဲ မခုန်ဘူး။ ရပ်လည်း မနေပါဘူး)ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
SUNDAY , 30 OCTOBER 2011.
ပထမ အကြိမ် မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးသို့ ပြင်ပဂျာနယ် သတင်းထောက်များ ပထမဆုံးအကြိမ် သတင်းရယူခွင့်ပြု။
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာလဆန်းအတွင်း ကျင်းပရန်ရှိသော၊ ပထမအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်
လွှတ်တော်၊ ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးသို့ နယ်မြေခံပြင်ပဂျာနယ်သတင်းထောက်များကို၊ တက်ရောက်
သတင်းရယူခွင့် ပြုကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(ကျွန်တော်အပါအဝင် ပြင်ပဂျာနယ်သတင်းထောက် ၇ ဦးကို အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီ
မှာ တာဝန်ရှိသူတွေက ခေါ်ပါတယ်။ လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာသတင်းရယူခွင့်ပြုကြောင်း
နဲ့ လိုက်နာရမဲ့ စည်းကမ်းတွေ ပြောပြပါတယ်)ဟု မြို့ခံဂျာနယ် သတင်းထောက်တဦးက ပြောပါသည်။
(ဂျာနယ်တွေကို ပြည်နယ်လွှတ်တော် သတင်းယူခွင့်ပြုတာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ကြီးရဲ့ စာနယ်ဇင်း စတုတ္တမဏ္ဍိုင် ဆိုတာ ကို အလေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ
ကိုယ့်အကြောင်း တင်ပြပြောဆိုတာကို ဒေသခံလူထု သိချင်နေကြတဲ့ဆန္ဒလည်း ပြည့်ဝသွားတာပေါ့)ဟု
အငြိမ်းစား ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောပါသည်။
ထိုင်း ရေးဘေးကြောင့် နေရပ်ပြန်သူများ အဓမ္မ ငွေတောင်းခံမှု့နှင့် ကြုံနေရ။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ရေကြီးမှု့ကြောင့် စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများ ပိတ်လိုက်သဖြင့် နေရပ်ကိုပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံ
သား အလုပ်သမားများကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြဝတီမြို့တွင် လူပွဲစားများက နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များနှင့်
ပေါင်းပြီး အဓမ္မ ငွေကြေးကောက်ခံမှု့များ လုပ်နေသဖြင့် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း အလုပ်
သမားများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
ယခုလဆန်းပိုင်းမှစ၍ ထိုင်းနိုင်ငံ အာယုဒ္ဒယ ခရိုင်၊ဘန်ကောက်မြို့အနီးရှိ ပထုံဌာနီနှင့် နဝပ်နခေါ စက်မှု့ဇုံ
ကြီးများတွင် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရသည့်အထိ ရေကြီးနေမှု့ကြောင့် မြန်မာ အလုပ်သမား ၂၀၀ ကျော်
ခန့်သည် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာနေရပ်ရင်းသို့ ပြန်လာနေကြောင်း မဲဆောက် - မြဝတီ
အာယုဒ္ဒယခရိုင် အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းမှ ပြန်လာသူတဦးဖြစ်သည့် ကိုဝကြီးက ( ၁၆ ရက်နေ့က ကိုယ့်အစီအစဉ်
နဲ့ ကိုယ်ပြန်လာကြတာပါ၊ မဲဆောက်ကို လိုင်းကားနဲ့ ပြန်လာကြတယ်၊ မဲဆောက်အဝင်မှာ ထိုင်း လဝက ရဲ့
ဖမ်းတာကိုခံရတယ်၊ နောက် မြဝတီဘက်ကမ်း ၉၉၉ ဂိတ်မှာသွားထားတယ်၊ မြဝတီဘက်ရောက်မှ လူပွဲစား
တွေက ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားပြီး၊ တယောက်ကို ထိုင်းဘတ် ၂၅၀၀ တောင်းတယ်၊မပေးလို့ မရဘူး) ဟု
အုတ်လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာအလုပ်သမားများမှာ ထောင်ဂဏန်းအထက်ရှိပြီး၊အများစုမှာ မည်သည့် အထောက်အထားလက်မှတ်မှ မရှိကြကြောင်းသိရှိရသည်။ ပထုံဌာနီခရိုင် ပလပ်စတစ်စက်ရုံမှ
ကိုတကော်ကလည်း ယမန်နေ့မနက်က မြဝတီ ၉၉၉ ဂိတ်သို့အရောက်တွင် ၄င်းနှင့်ပါလာသူ အလုပ်သမား
၁၀ ယောက်မှာ လူပွဲစားများအား တယောက်လျှင် ဘတ်ငွေ ၂၅၀၀ ပေးခဲ့ရကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့
ဘန်ကောက်မြို့မှ ပြန်လာသူတဦးဖြစ်သည့် မစန်းစန်းနွယ်ကလည်း သူအပါအဝင် အမျိုးသမီး ၃ ဦးသည်
လူပွဲစားများကို ငွေပေးရသည့်အပြင် ချိန်းချောက်မှု့ပါ ခံရကြောင်း (ကျမတို့ ၃ယောက်က ဘတ်ငွေ ၂၀၀၀
ကျော်ဘဲပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ ရှင်းပြလို့မရဘူး။ အဲဒီဂိတ်မှာ ၂ ညအိပ်ခဲ့ရတယ်။ ဘန်ကောက်မှာရှိနေတဲ့ အမ
တွေဆီကို လူပွဲစားတွေရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး သူတို့ဘဏ်စာရင်းထဲကို ငွေလွှဲခိုင်းရ
တယ်၊ ငွေရမှ ကျမတို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးတယ်။ ဒါတောင်မှ ထမင်းဘိုးအတွက် တရက်ကို ဘတ် ၁၀၀ နှုန်းကို
သပ်သပ် ထပ်ပေးခဲ့ရတယ်) ဟုပြောပြသည်။
မြဝတီမှ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့သို့ ကားစရိတ်မှာ လူတယောက် ကျပ် တစ်သောင်းပေးရပြီး မြဝတီမြို့
အမှတ် ၅ရပ်ကွက်အတွင်း တည်ရှိသည့် ၉၉၉ ဂိတ်သည် ယခင်က DKBA ၉၉၉ အထူးတပ်ရင်း၏ ဂိတ်ဖြစ်
ပြီး၊ဘန်ကောက်မှတဆင့် အဖမ်းခံရသူများကို ထိုင်းလူဝင်မှု့ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့သည့်
နေရာဖြစ်သည်။ ပြန်ဝင်လာသူများအနက် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် တရားဝင်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေ
ကြသူများထက် တရားမဝင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသူများကြောင်းသိရသည်။
ထိုင်းနှင့် မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်အရ ထုတ်ပေးထားသည့် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်
ငံတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများအနေဖြင့် အပြန်တွင် အခက်အခဲတစုံတရာမရှိကြောင်းကို နွန်
ထဘူရီ အရပ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်မှ ပြန်လာသူတဦးဖြစ်သည့် ကိုအောင် ဆိုသူက
(ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ မြန်မာဘက်ကို အချိန်မရွှေး သွားလို့ရတယ်၊မြန်မာဘက်ပြန်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်နေ
တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ထိုင်း လဝက ရုံးမှာ တုံးသွားထုရတယ်။ ဘတ် ၁၀၀၀ ပေးရတယ်၊တချို့ကျတော့လည်း
ဘန်ကောက်မှာ မထုဘဲ မဲဆောက်ရောက်မှ ထိုင်း လဝက ရုံးမှာ ထုကြတယ်၊ ပေးရတာခြင်းကတော့ အတူ
ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဘန်ကောက်မှ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့် မဲဆောက်တဆင့် နေရပ်ပြန်ရန်ရောက်ရှိ
လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀၀ အထက်တွင်ရှိကြောင်း ထိုင်း လဝက ဝန်ထမ်းတဦးကပြောပြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ သန်းမှ ၄ သန်းအကြားရှိနေပြီး၊
အထောက်အထား လက်မှတ် လုပ်ကိုင်ထားသူမှာ ၁ သန်းကျော်သာရှိကြောင်းသိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရေကြီးမှု့ကြောင့် အဓိက စက်ရုံ အလုပ်ရုံများ ပိတ်လိုက်ရ၍ အလုပ်သမားပေါင်း ၆၂၀၀၀၀
ကျော် အလုပ်ရပ်နားခဲ့ရကြောင်း ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီး Padermchai Sasomsap ၏ ပြောကြားချက်ကို
ကိုးကား၍ ယနေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပိုစ် သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြပါရှိသည်။ အောက်တိုဘာလ ဒုတိယပါတ်
အတွင်း ဗဟိုဘဏ်၏တွက်ချက်မှု့အရ ယင်းရေကြီးမှု့ကြောင့် ဘတ်ငွေ ဘီလီယံ ၁၀၀ (အမေရိကန် ဒေါ်
လာ ၃.၃ ဘီလီယံခန့်) ဆုံးရှုံးမှု့ ဖြစ်နေကြောင်းသိရသည်။
MONDAY , 31 OCTOBER 2011/
အစိမ်းရောင် စီးပွားရေးညီလာခံ နော်ဝေသဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ဝန်ကြီး စာတမ်းဖတ်မည်။
အစိုးရသက်တမ်း ခြောက်လကျော်ကာလအတွင်း ပဌမဆုံးအကြိမ် အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပမည့် အစိမ်းရောင် စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု့ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာခံတွင် နော်ဝေနိုင်ငံ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့်
နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီး Dr.Rajendra Pauchauri က စာတမ်းဖတ်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါညီ
လာခံကို စီစဉ်သော Convening Group မှ မီဒီယာပိုင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရထားသူ ဦးကိုကို (ကိုကို-စက်မှု တက္ကသိုလ်) ကပြောကြားသည်။ အဆိုပါညီလာခံတွင်နိုင်ငံအသီးသီးမှ စာတမ်းများဖတ်ကြားမည်ဖြစ်ရာ
သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရှင်များက ဆွေးနွေးကြမည့်အပြင်
နော်ဝေ နိုင်ငံမှ Dr.Ragendra Pauchauri ကလည်း ဖတ်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း။ (ဒီပွဲကို နေပြည်တော်နဲ့
ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပမယ် ဆိုပေမဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ဝန်ကြီးက နေပြည်တော်မှာ စာတမ်းဖတ်ပြီးတာနဲ့ ပြန်မှာ။ တရက်ဘဲနေမှာ) ဟု ၄င်းကပြောကြားသည်။
အဆိုပါညီလာခံတွင် အမေရိကန်၊ ၈ျပန်၊ နော်ဝေ၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ ဗယက်နမ်၊ စင်ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေး
ရှား၊နိုင်ငံတို့မှ ကမ္ဘာကျော် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ ဥက္ကဌများနှင့်၊ ပညာရှင်များ
က လာရောက်မည်ဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နှင့် ၂ ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကာ
နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နှင့် ၄ ရက်တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း။နေပြည်တောတွင် ကျင်းပမည့်
ညီလာခံတွင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီများကိုပါ ဖိတ်
ကြားထားပြီး တက်ရောက်သူများအတွက် မေးခွန်းများ မေးမြန်းနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဦးကိုကိုက ပြော
ကြားခဲ့သည်ဟု ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် The Voice ဂျာနယ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ပြီးလျှင် NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေး စဉ်းစားမည်ဟုဆို။
အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့ပြီးရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD
ပါတီ ထပ်မံမှတ်ပုံတင်ရေး ကစ္စကို ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသည်။
အရပ်သားအစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် စတုတ္တအကြိမ်မြောက်
တွေ့ဆုံမှု့အဖြစ်၊ ရန်ကုန်မြို့ စိမ်းလဲ့ကန်သာ ဧည့်ဂေဟာတွင် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်း
က တနာရီနီးပါးခန့်ကြာမြင့်ခဲ့သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု့အပြီး ပြည်တွင်း မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ( ကျမတို့ NLD ပါတီ ပြန်ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စဟာ ဥပဒေအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီဥပဒေ အတည်ပြုပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့အထိ ကျမတို့ စောင့်ပြီးမှ ပြောနှိုင်မဲ့
ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့က ဒီဥပဒေထွက်လာပြီဆိုရင် ပါတီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အစည်းအဝေးခေါ်
ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချပါ့မယ်။ ကျမတို့က တိကျတယ်လေ။ ဥပဒေကို ကြည့်ပြီးမှပြောတယ်။ မကြည့်ရ
သေးလို့၊ ကျမ မမြင်ရသေးလို့ မပြောသေးတာပါ) ဟု ပြောဆိုပါသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မတ်လဆန်းအတွင်း ယခင်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း
ဥပဒေပါ၊ ကန့်သတ်ချက်အချို့ကို ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုရန် ပြည်ထောင်စု ရွှေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တဦး
က အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ အဆိုပြုချက် တင်သွင်းခဲ့ရာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အား တရားဝင်
နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်လာနှိုင်စေရန် ဖြေလျှော့မှု့တခု ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြောင်း
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အချို့က မှတ်ချက်ပြုသည်။
Sunday, 30 October 2011/
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ကော်မီတီ ဥက္ကဌများနှင့် ကုလ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး ကိုယ်စားလှယ်တို့ ဆွေးနွေး။
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ကော်မီတီဥက္ကဌများနှင့် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်
များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး ကိုယ်စားလှယ်တို့ နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံပြည်သူ့လွှတ် တော်ရေးရာ အဆောင်အမှတ်(၁)တွင် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးပိုင်းဆိုင်ရာကော်
မီတီ ဥက္ကဌ ဦးဌေးဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးကော်မီတီဥက္ကဌဦးလှမြင့်ဦး၊ ပြည်သူ့လွတ်
တော် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မီတီ ဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင်ဆွေ
တို့သည်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးမှ Assistant High Commissioner for ProtectionMs.ErikaFleer အဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု့မှာ ၁ နာရီနှင့် ၅ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ (လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပါတ်သက်လို့
အဓိကအားဖြင့် သူနှစ်ချက်ဆွေးနွေးတယ်။ တစ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခသည်တွေကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်
လို့ ဟိုဘက်မှာ Refugee Camps တွေရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပါတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ
ကို ပြန်လာဘို့ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ဟာတခုပြောတယ်။ နောက်တခုကတော့နိုင်ငံမဲ့ နိုင်ငံသားတွေမရှိဘို့ ဆိုတဲ့
ကိစ္စပြောတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကလည်း ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။နိုင်ငံ
တော်ကလည်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကျွန်တော်ကလည်း ပြန်
ရှင်းပြတယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းတိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတော့ အားလုံး ဒုက္ခသည်တွေ မဟုတ်ကြ
ပါဘူး။ သူ့အိမ်သူပြန်လာလို့ရတဲ့ သူတွေချည်းပါဘဲ။ လာမယ်ဆိုရင် လာပါလို့ အစိုးရက ပြောထားပြီးသား
ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် နိုင်ငံမဲ့ နိုင်ငံသား ဆိုတာကတော့ မရှိသင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သေချာအောင်စီစစ်ပြီးမှ
ဒါကလည်း လွတ်တော်မှာလည်း လုပ်နေတယ်။နိုင်ငံတော ဝန်ကြီးဌာနကလည်း လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့
အဓိက ကတော့ ဒါပါဘဲ) ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မီတီ ဥက္ကဌ
ဦးဌေးဦးက Biweekly Eleven News Jornal ၏မေးမြန်းမှု့အပေါ် ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်ကာလအတွင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု့များနှင့် သဘောတူညီမှု့ ရရှိချက်များနှင့်
ပါတ်သက်၍ Biwekky Eleven News Jornal ၏ မေးမြန်းချက်ကိုမူ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးမှ
Commissioner for Protection Ms.Erika Feller က ( အခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု့ကတော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စား
ဘို့ကောင်းပါတယ်။ ကျမ အများကြီးသိခဲ့ရတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဦးတည်ချက် လမ်းကြောင်းသစ်
ဆီ ဆောင်ကြဉ်းနှိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျမအနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်
ပိုင်းရှိ ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ ပဋိပက္ခဒဏ် ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေ
ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ အဲဒီအကြောင်းတွေ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်)ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
သူကဆက်လက်၍ ပြောကြားသည်မှာ (နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ လူဝန်မှု့ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်
သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးတို့နဲ့လည်း ဒီမနက်က ကျမ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့
အရေးပါ အဓိကကျတဲ့ သဘောတူညီချက်တွေ ရရှိဘို့ မမျှော်လင့်ပါဘူး။ ကျမတို့ မျှော်လင့် ရရှိဘို့ကတော့
ကျမတို့လုပ်ဆောင်တေကျ အစီအစဉ်တွေ၊ ဒီထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်သွားနှိုင်ဘို့ပါဘဲ။ ဒါ့ထက် ရလာတဲ့ ရလဒ်
တွေနဲ့ပါတ်သက်လို့ ကြေနပ် အားရမိပါတယ်) ဟု ဆက်လက်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
၄င်းနှင့်အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးမှ ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများ
နှင့်စပ်လျှင်း၍ အကဲဖြတ်ရန်နှင့်၊ ထပ်မံလိုအပ်သည့် အကူအညီများနှင့် စပ်လျှင်း၍ ဆုံးဖြတ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ
သို့ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် အပြုသဘောဆောင်ပြီး အရေးပါသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရေးနှင့်ပါတ်သက်ပြီး လေ့လာမှု့များပြုလုပ်
ရန် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.Marty Natalegawa က ခရီးစဉ်နှစ်ရက်တာကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်
ငံတွင် အပြုသဘောဆောင်ပြီး အရေးပါသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို မြင်တွေခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး သည် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီမိနစ် ၃၀ အချိန်
တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟော်တယ်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း သတင်းထောက်များကို
( မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်မှာ အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အာဆီယံ
အလှည့်ကျ ဥက္ကဌ ရာထူးကိစ္စက အဓိကမဟုတ်တဲ့အရာလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အာဆီယံ အလှည့်ကျ
ဥက္ကဌ အတွက်မဟုတ်တောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အတိုင်း ဆက်သွားနေဘို့လိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ လုပ်ဆောင်နေတာကို ကျွန်တော်တို့အခု မြင်တွေ့နေရပါတယ်။
ဒီအရာတွေက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကိစ္စပါ) ဟု အဆိုပါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက သတင်းထောက်များကို
အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်း
မှု့များကို လာရောက်လေ့လာသည့် ခရီးစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံ ဥက္ကဌ ရာထူးတာဝန်ကို ထမ်း
ဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်များကို ကြိုးပမ်းဖြည့်ဆည်းနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ဥက္ကဌ ရာထူးရယူ
ရေးအတွက် မြန်မာပြည်သူများ၊ အာဆီယံပြည်သူများ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် အာဆီယံကို နားလည်ကြောင်း၊ အာဆီယံအနေဖြင့်လည်း အာဆီယံ
ပြည်သူများနှင့် အဆက်မပြတ် ထိတွေ့နေပြီး အားဆီယံပြည်သူများ၏အသံကို နားစွင့်နေကြောင်း ပြော
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ရက်ကြာလေ့လာရုံဖြင့် အလုံးစုံကို နားလည်သည်ဟု မဆိုနှိုင်သော်လည်း
ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်တွေ့မြင်လေ့လာခဲ့ရကြောင်း ထပ်မံပြောဆိုပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှား ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့သည် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါနေ့မှာပင် မြန်မာနိုင်ငံ
အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံတော် အကြံပေးအဖွဲ့နှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းအချို့
ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ရကြောင်း၊ သိရှိရပါသည်။အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်သို့သွား
ရောက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်၊ အစိုးရအဖွဲ့
ဝင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အဆိုပါနေ့ ညဦးပိုင်းအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည်နှင့် ဆက်လက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယခု ခရီးစဉ်အတွင်း ရရှိခဲ့သောအတွေ့အကြုံများကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဆူဆီလိုဘန်ဘမ်းယူဒိုယူနို
နှင့်အခြားသော အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများသို့ ပြန်လည်မျှဝေသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီ တွင်ပြုလုပ်မည့်၊ (၁၉)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင်လည်း တင်
၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဌ နေရာအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရယူရေးကိစ္စကို နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်
နေ့မှ ၁၉ ရက်နေ့အထိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီတွင် ပြုလုပ်မည့် (၁၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးဆွေး
နွေးပွဲတွင် ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ပြီး ထိုဆွေးနွေးပွဲ မတိုင်မှီ အင်ဒိုနီးရှား ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့
နံနက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လညိ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ စတုတ္တ အကြိမ် တွေ့ဆုံမည်။
အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့မှာ စတုတ္တ
အကြိမ်မြောက်အဖြစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စိမ်းလဲ့ကန်သာ ဧည့်ဂေဟာတွင် တွေ့
ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က တတိယမြောက်အဖြစ်
နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံထားခဲ့ပြီး အဆိုပါဆွေးနွေးမှု့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန်
စဉ်းစားဆောင်ရွက်နေသည့်ကိစ္စ။ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် နှစ်ဘက်ပူးပေါင်း ဆောင်
ရွက်မည့်ကိစ္စ။ ဥပဒေပြင်ပတွင် လက်နက်ကိုင်ဆောင် ဆန့်ကျင်နေကြသူများကို ဥပဒေဘောင်အတွင်း ထာ
ဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ပေးရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကိစ္စများနှင့် ပြည်
တွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စများကို ဆွေး
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅
ရက်နေ့က ပဌမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နှင့်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်
နေ့တို့တွင် တွေ့ဆုံခဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခင် အစိုးရလက်ထက်တွင်မူ ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း
ယခုတွေ့ဆုံမှု့သည် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂ ရက်ကြာ လာရောက်ခဲ့သည့် အမေ
ရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒဲရက်မစ်ချယ် ၏ ဒုတိယခရီးစဉ်အပြီး ရသတ္တပါတ်အတွင်း
အချိန် ၂ လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သော ဒဲရက်မစ်ချယ် သည်၊နေပြည်တော်တွင် အစိုးရအဖွဲ့
ဝင်များနှင့်၎င်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်၎င်း သီးခြားစီ တွေ့ဆုံထားခဲ့ပါသည်။ ဒဲရက်မစ်ချယ်၏ ဒုတိယခရီးစဉ်အတွင်း ဆွေးနွေမှု့များနှင့်ပါတ်သက်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရမှ သီးခြားထုတ်
ပြန်ချက် မထုတ်ခဲ့သည့်နည်းတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်မှလည်း ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဦးအောင်ကြည်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသော နေ့ရက်များမှာ။
၀၁။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်။
၀၂။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်။
၀၃။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်။
၀၄။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်။
၀၅။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်။
၀၆။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်။
၀၇။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်။
၀၈။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်။
၀၉။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်။
၁၀။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက် ( အစိုးရသစ် လက်ထက် ပဌမအကြိမ်)
၁၁။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် ( အစိုးရသစ်လက်ထက် ဒုတိယအကြိမ်)
၁၂။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် (အစိုးရသစ်လက်ထက် တတိယအကြိမ်) တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ELEVEN MEDIA GROUPFRIDAY, 28 OCTOBER 2011.
၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဌတာဝန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းမှု့ကို နားလည်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏
ကြိုးပမ်းနေမှု့ကို နားလည်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
သည် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ညဦးပိုင်း အချိန်က အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.Marty
Natalegawa ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် သတင်းထောက်များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်
( သူကတော့ ရှင်းပြတာပါ။ ဘယ်လိုလုပ်နေသလဲပေါ့။ အန်တီကလည်း ပြောပါတယ်။ နားလည်ပါတယ်လို့။
မြန်မာနိုင်ငံက အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဌကို မျှော်မှန်းနေတဲ့ကိစ္စအကြောင်းနားလည်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အ
မြင်တွေကိုလည်း နားလည်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ၂၀၁၄ မှာ အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌ
ဖြစ်လာမလား ဆိုတာကိုတော့ သူတို့ဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်။ အာဆီယံက ဆုံးဖြတ်ရမဲ့ကိစ္စဘဲ။ အာဆီယံအလှည့်
ကျဥက္ကဌနဲ့ပါတ်သက်လို့ အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရော အာဆီယံကတိုင်းပြည်တွေကပါ အားလုံး
ဝမ်းသာနှိုင်မဲ့ အဖြေတခုရအောင်လို့တော့ ဖြစ်နှိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်) ဟု
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထားရှိသော စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု့များနှင့်ပါတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏
သဘောထားကို သတင်းထောက်များက မေးမြန်းရာ အဆိုပါ ပိတ်ဆို့ရေးယူမှု့များ ပြုလုပ်ခဲ့သော နိုင်ငံများ၏
သဘောထားနှင့်သာ သက်ဆိုင်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။
( စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု့ကို အစကတည်းက သူတို့လုပ်ကတည်းက ဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့်ဆိုပြီး သေ
သေချာချာ ပြောထားတာရှိပါတယ်။ ဒီပိတ်ဆို့မှု့တွေ ရုပ်သိမ်းရေး၊ မရုပ်သိမ်းရေး ဆိုတာ ဒီအချက်တွေကို
ကြည့်လိုက်ပေါ့။ ပြောထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီလို့ရှိရင် သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်
ညီလို့ရှိရင် သူတို့ဟာသူတို့ ဖြုတ်မှာဘဲ။ ပြောနေစရာလည်း ဘာမှလိုမှာမဟုတ်ဘူး) ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဘောထာမှာ အရေးပါသည်ဟု ယူဆပါ
သလား ဟူသောမေးခွန်းကိုမူ ( မဆိုင်ပါဘူး။အန်တီနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။သူတို့ပြောထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်
ညီတယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာသူတို့ဖြုတ်မှာဘဲ။ဒီအချက်တွေက အန်တီပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အန်တီက
နေပြီး ဒီအချက်တွေထည့်ပါဆိုပြီး ပြောထားတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်ပြောရလို့ရှိရင် အန်တီလည်း
မသိပါဘူး။ ထွက်လာပြီးတော့မှ ဖတ်ရတာပေါ့) ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေး ကိစ္စကိုမူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ သဘောထားဖြင့်သာ ဆုံးဖြတ်
သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများ ထပ်မံလွတ်မြောက်လာမည်ကို
လည်း ယုံကြည်ကြောင်း အစရှိသောကိစ္စများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ELEVEN MEIDA GROUPSATURDAY,29 OCTOBER 2011
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ရွှေးကောင်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၅(ခ)အရ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြေငြာ။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ရွှေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ
ပုဒ်မ ၇၅(ခ) အရ၊ ပြည်ထောင်စုရွှေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြေငြာခြင်း။
ကြေငြာချက် အမှတ် ၅၈/၂၀၁၁ ကို အောက်တိုလာဘလ ၂၈ ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။
ပြည်ထောင်စုရွှေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ၂၈၀၁-၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်သတ်လွှာ ပြင်ဆင်
မှု့အမှတ် (၁၂/၂၀၁၁) နှင့် (၁၃/၂၀၁၁)ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ဦးအောင်မြင့်(ခ)ဇာဟီဒုလ္လာ ကို၎င်း၊ရခိုင်
ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အတွက် ဦးဘော်ရှီးအာမတ်
ကို၎င်း၊ ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းသည် ဥပဒေအရ
ပျယ်ပျက်ကြောင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီတောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၏ ပြည်နယ်လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးမောင်စံရွှေ ကို၎င်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့
နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၏ ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဒေါက်တာ ဘော်ရှီးရ်အာမတ်
ကို၎င်း ဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသူများဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွတ်
တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၇၅(က)အရ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ ဦးအောင်မြင့်(ခ) ဦးဇာဟီဒုလ္လာနှင့် ဦးဘော်ရှီးအာမတ်တိုနှစ်ဦးသည် ယခုကြေငြာသည့်
အချိန်မှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့်မရှိ
တော့ကြောင်းနှင့် ဦးမောင်စံရွှေ(၁၀/ဘသတ(နိုင်)၀၀၉၃၃၈) ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အ
မှတ်(၁)နှင့်ဒေါက်တာဘော်ရီရ်အာမတ် (A1/၁၄၆၄၅၃) ဘူးသီတောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
တို့သည် ယင်းတို့နှင့်ယှဉ်တွဲဖေါ်ပြပါ မဲဆန္ဒနယ်၏ ရခိုင်ပြည်နယ် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
အဖြစ် သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၇၅(ခ)အရ သတ်မှတ် ကြေငြာလိုက်ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် မြဝတီသတင်းတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ပု၈ံရှေးဟောင်းဒေသတွင် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ညဈေးတန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် စီစဉ်နေကြောင်း ဟိုတယ်
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ပုဂံဇုံ)ဥက္ကဌ ဦူးသန်းရွှေက ပြောကြားသည်။
(၂၀၀၉ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ဖွင့်ဘို့စီစဉ်နေတာ၊အခုနိုဝင်ဘာလထဲမှာကျင်းပမဲ့ GMS အစည်း
အဝေးအမှီ ဖွင့်သွားဘို့စီစဉ်နေတယ်)ဟု ဦးသန်းရွှေကဆိုသည်။ယခင်က ပုဂံဒေသတွင် ညဈေးတန်း
ဖွင့်ရန် နေရာ ၃ နေရာ စီစဉ်ခဲ့သော်လည်းယခုရွေးချယ်လိုက်သော ဗူးဘုရားအနီး ပေပင်ကျောင်း
ဘုရား၏တောင်ဘက် ဗူးဘုရားစေတီသို့ သွားသောလမ်း၏ အရှေ့ဘက်နှင့် အနောက်ဘက် မြေကွက်
တခုတွင်ဖြစ်သည်။ပုဂံမြို့တွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံ ၆ နိုင်ငံပါဝင်သော မဲခေါင်ဒေသခွဲ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအစီအစည်းအဝေ GMS ကျင်းပရန်စီစဉ်နေပြီး ယင်းအစည်းအဝေးအမှီ ညဈေးတန်းအား ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပု၈ံဒေသအား ခရီးသွားအထူးဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ယခုလ ၁ ရက်နေ့
မှစတင်ကာ ပုဂံလေဆိပ်တွင် တိုးရစ် စုံစမ်းရေးဌာန ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှ စတင်
ကာ တယ်လီဖုန်းငှားရမ်းမှု့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဇီးအိုရွာအား တိုးဆိုက်အသစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း စသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေး ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရသည်။
SATURDAY,29 OCTOBER 2011
တရုပ် ရုပ်သံလိုင်း ၃လိုင်း မြန်မာရုပ်သံပလက်ဖောင်းမှ စတင်ထုတ်လွှင့်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လက်ရှိ အရပ်သားအစိုးရနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် မ်ိတ်ဘက်နိုင်ငံအဖြစ် ယခုနှစ်အတွင်း
စတင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည့် တရုပ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရပိုင် CCTV ရုပ်သံလိုင်း ၃ လိုင်းသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံ
ရှိ အခပေး ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု့များ လုပ်ကိုင်နေသည့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္မဏီ ၂ ခုနှင့် ပူးပေါင်းကာ အောက်တို
ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်း ရုပ်သံလိုင်းများမှတဆင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသ
မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန် မြို့တော်ရှိ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသည့် တရုပ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ရုပ်သံလိုင်း CCTV နှင့်
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေသော Forever Group ကုမ္မဏီ၊ ရွှေသံလွင်
ကုမ္မဏီတို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း CCTV ရုပ်သံလိုင်း တိုက်ရိုက် စတင်ထုတ်လွှင့်သည့်အခန်း
အနားတွင် ဦးစိုးဝင်းက ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒစ်၈ျစ်တယ် နည်းပညာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ
တွင် ထုတ်လွှင့်နေသော Forever Group ကုမ္မဏီ ရုပ်သံလိုင်းများမှ တဆင့်လည်းကောင်း၊ ဂြိုလ်တုမှ
တဆင့် လည်းကောင်း၊ တရုပ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ CCTV ရုပ်သံလိုင်း ၃ လိုင်းကို မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်တွင် ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ ၅ မိနစ်က စက်ခလုပ်နှိပ်၍ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
ရန်ကုန့်မြို့တော်ရှိ Forever Group ကုမ္မဏီက ဒစ်ဂျီတယ် နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လွှင့်သည့် အခပေး ရုပ်သံ
လိုင်း ဝယ်ယူထားသူတဦးက တရုပ်နိုင်ငံမှ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ထုတ်လွှင့်နေသောလိုင်းကို သဘောကျ
ကြောင်း တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနှိုင်ပါက ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ
သိရှိခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း The Voice Weekly သို့ မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားသည်။
မြန်မာရုပ်သံ ပလက်ဖေါင်းမှ CCTV-4 / CCTV-News / CCTV-9 တို့ကို စတင်ထုတ်လွှင့်လျှက်ရှိပြီး ထို ၃
လိုင်းအနက် ၂ လိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်လွှင့်နေသော လိုင်းများဖြစ်ပြီး CCTV-4 မှာ တရုပ်ဘာ
သာဖြင့် ထုတ်လွှင့်နေသော ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သည်။ ရွှေသံလွင်ကုမ္မဏီ၏ အကြီးအကဲ ဦးကျော်ဝင်းက တရုပ်
ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ CCTV ရုပ်သံလိုင်း ၃ လိုင်းကို၊ မြန်မာရုပ်သံ ပလက်ဖေါင်းမှ စတင်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်
အတွက် များစွာဂုဏ်ယူမိကြောင်း ဖွင့်ပွဲအခန်းအနားတွင် ထုတ်ဖေါ်ချီးကျူး ပြောကြားခဲ့သည်ကို တွေ့ရ
သည်။ တရုပ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ၏ ရုပ်မြင်သံကြားဌာနသည် ယခုအခါ ကမ္ဘာနှင့် အဝှမ်း တရုပ်၊ ပြင်သစ်၊
အင်္ဂလိပ်၊အာရပ်၊ရုရှား၊စပိန် ဘာသာများဖြင့် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်လျှက်ရှိပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၀ မှ ကြည့်ရှုသူ သန်း ၁၅၀ ကျော်အထိ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစတင်၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်လွှင့်နေသော CCTV
news ကိုတိုးချဲ့ရန် ပြင်ဆင်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ယခုအခါ CCTV အပါအဝင် မြန်မာ
နိုင်ငံတွင် ထုတ်လွှင့်နေသော အခပေး၊ အခမဲ့ ရုပ်သံလိုင်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး
ဝန်ကြီးဌာန၏ တရားဝင် စာရင်းများအရ သိရှိရသည်။
THE VOICE JOURNALSATURDAY , 29 OCTOBER 2011.
နိုင်ငံရေးကောင်းမှ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြော။
တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ အပားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းက နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော၊ ဘောလုံး အားကစား အဆင့်အတန်းတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံ ဆွေး
( နိုင်ငံရေးကောင်းမှ ဘောလုံးကောင်းမယ်။ နိုင်ငံရေးကောင်းမှ ပြည်ပ အရင်းအနှီးတွေ ဝင်လာပြီး နိုင်ငံ့စီးပွာရေး ကောင်းလာမယ်။ အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် လက်ရှိ အစိုးရအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အပြောင်းအလဲကို သွားနေတဲ့ အစိုးရကို ထောက်ခံဘို့လိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်ဘို့ အစိုးရအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်နေပါတယ် )ဟု
အောက်တိုဘာလ ၁၈ နှင့် ၁၉ ရက်တို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာ့
ဘော်လုံး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ဘဏ္ဏာငွေ အထောက်အပံ့များပေးရန် လိုကြောင်း တင်ပြခဲ့
သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် လက်ရှိတွင် ဖီဖာ ၏ထောက်ပံ့ငွေများဖြင့်သာ လည်
ပါတ်လျှက်ရှိပြီး၊ မလုံလောက်သဖြင့် မိမိပိုင် ငွေကြေးများကို စိုက်ထုတ်သုံးစွဲနေရကြောင်း။ မြန်မာနိုင်ငံ
ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် တနှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃သန်းခန့် အကုန်ကျခံ သုံးစွဲနေရကြောင်း
ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော် ကပြောသည်။
အစိုးရသစ်အနေဖြင့် လက်ရှိတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လျှာထားချက် ဘတ်၈ျက်ကိုသာ သုံးစွဲနေရ
ကြောင်း၊ မိမိတို့ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာဘောလုံး ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်
သော အသုံးစရိတ်များကို လာမည့် ဘတ်ဂျက်နှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြတောင်းခံ
သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးကပြောသည်။ (လက်ရှိ အစိုးရက ဒီလောက်ပဲရှိလို့ ဒီ
လောက်ပဲ ပေးနှိုင်တာ။ အစိုးရမှာလည်း ငွေကြေးအများကြီးရှိတာ မဟုတ်ဘူး၊ ပေါ်လစီပဲ ချပေးနှိုင်တာဒါကြောင့် နိုင်ငံ့စီးပွားကောင်းလာဘို့ အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲဆီ သွားနေပါတယ် ) ဟု
VENUS NEWS JOURNAL.SATURDAY , 29 OCTOBER 2011.
WFP မှစားနပ်ရိက္ခာ ၅၂၀၀၀ တန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ကူညီမည်။
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် ( WFP ) က ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ တန်ဘိုးရှိ
သော မက်ထရစ်တန် ၅၂၀၀၀ ကို ပြည်တွင်းရှိ လူဦးရေ ၂ သန်းထံသို့ ဖြန့်ဝေရန် စီစဉ်ထားကြောင်း
အကူအညီတွေ ထိရောက်ဘို့ Planning ကောင်းကောင်းတွေလိုတယ်ဗျ။ အဲဒီလို Planning ရှိပြီဆိုရင်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဘို့ လုပ်နှိုင်ရမယ်။ အခုချင်းပြည်နယ်မှာ လူတွေ ဆင်းရဲတယ်။ စားနပ်ရိက္ခာမလုံ
လောက်ဘူး။ ဟုတ်ပြီ အဲဒါအမှန်ပါဘဲ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ မလုံလောက်တာလဲ
ဆိုတာ စာရင်းအတိအကျ မရှိဘူး။ စစ်တမ်းတွေ ထွက်လာဘို့ ဌာနဆိုင်ရာ အကူအညီင်္တွေ လိုအပ်နေ
တယ်ဟု ဖွံ့ ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ကိုမိုးဝင်းအောင်ကပြောသည်။
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်က စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှု့တွေ ကြုံတွေ့ခံစားနေရသူများအတွက်
လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး နှင့် ခံနှိုင်စွမ်းရှိရေးတို့ကို
လုပ်ငန်းကြီး ၃ ရပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်သည်
အချို့တဲ့ဆုံး လူအုပ်စုများ၏ နေ့စဉ် ဘသနေထိုင်မှု့၊ အဟာရပြည့်ဝမှု့ အဆင့်နှင့် အခြေခံစီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ဟု ကမ္ဘာ့
စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ ဒါရိုက်တာ Carlos Veloso ကပြောသည်။
Food For Educatuon (ပညာရေးအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ) အစီအစဉ်ဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မိသားစု
များ၏ကလေးများ ကျောင်းထားနှိုင်ရေး၊ Food For Work (လုပ်အားအတွက် စာနပ်ရိက္ခာ)အစီအစဉ်ဖြင့်
စာနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်သော နယ်မြေများတွင် ရာသီအလိုက် ဝင်ငွေရရှိနှိုင်မည့် အခွင့်အလမ်ူများ
ဖန်တီးပေးခြင်းနေခြင်းသည် နိုင်ငံအတွင်း ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု့ သံသရာကို ချိုးဖျက်နှိုင်ရန် ကာလရှည် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မှု့၏ တစိတ်တဒေသပင်ဖြစ်ကြောင်း Carlos Veloso ကဆက်ပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ်မှာ WFP ကလမ်းဖေါက်ပေးတယ်၊ လုပ်အားလာပေးတဲ့လူထုကို ဆန်ပေးတယ် Food For
Work ပေါ့။ Ford For Training ဆိုတာလည်း ရှိတယ်။ ကျန်းမ္မာရေး ဗဟုသုတ္တ သင်တန်းတွေခေါ်ပြီး
လာတကိတဲ့သူတွေကို ဆန်ပေးတယ်။ Ford For Education ကျတော့ ကလေးတွေက ကျောင်းနေချိန်
မှာ ကျောင်းတက်ရမဲ့အစား မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်လုပ်ပေးနေရတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်
ကျောင်းတက်လာနှိုင်အောင် ဆွဲဆောင်ပြီးတော့ ကျောင်းလာတက်ရင် အစားအစာ ပေးတာမျိုးပါ။
ဟု ချင်းပြည်နယ်ရှိ OCHA (ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှု့ အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းပေး
မှူးရုံး) တွငိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ တစ်ဦးကပြောသည်။
လာမည့်နှစ်များတွင် ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်သည် သက်ဆိုင်သူအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းလျှက်
လုပ်ငန်း အမျိုးမျိုး ဆောင်ရွက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာဝ ဘေးအန္တရယ် ကျရောက်လေ့ရှိသော နယ်
မြေဒေသများ သို့မဟုတ် ဝေးလံသောနယ်မြေ ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသည့် ဘဝရပ်တည်ရန်
ခက်ခဲနေသူများအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ ရရှိနှိုင်မှု့နှင့် အခြေခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နှိုင်မှု့
တို့ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာ
Venus News Jornal
SATURDAY, 29 OVCTOBER 2011
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားလိုစွဲဆိုသောအမှုကို လက်ခံသင့် မသင့် ကြားနာမည်။
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တွင် အမှု့အမှတ် ၃၂၆/၂၀၁၁
ကိုတရားလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တရားလိုရှေ့နေ ဦးဥာဏ်ဝင်း၊ ဦးကြည်ဝင်းတို့က လိုက်ပါရွေက်ပြီး၊
တရားပြိုင် ၁။ဦးအောင်ဆန်းဦး ၂။ ၀ဏ္ဏဦးလှမြင့်ဆွေ ၃။ ဦးမြတ်ခိုင်(မော်နီတာဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် )
တို့အမှု့အား ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက် ( ကြာသပတေးနေ့ ) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အမှု့
လက်ခံရန် သင့် မသင့် ကြားနာမည်။
ယင်းအမှု့မှာ တရားမ အထွေထွေ လျှောက်လွှာဖြစ်ပြီး မူလအမှု့ဖြစ်သော ဦးအောင်ဆန်းဦး နှင့် ဒေါ်
အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ တရားမအမှု့မှ ဆက်သွယ်ပေါ်ပေါက်လာသော အမှု့ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
VENUSNEWS JORNALSTAURDAY , 29 OCTOBER 2011
English to Myanmar ဘာသာပြန်ဆိုရန်နေရာ
ကွန်ပြူတာထဲမှာထည့်ဘို့ အင်္ဂလပ် - မြန်မာ ဆော့ဝဲလ် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်။
အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်...
လူရွှင်တော် ဇာဂနာ(ခ) ကိုသူရဟာ အကျဉ်းထောင်ကလွတ်လာပြီး ဂျာနယ်စာမျက်နှာများပေါ်မှာပရိတ်သတ်
စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် ပြန်လုပ်ခွင့်ရ မရ ဆိုတာကိုမသိရသေးပေမဲ့၊ သူရဲ့အရင်ရှိထားတဲ့ ဘလော့ဂ်
စာမျက်နှာတွေ ဆက်ပြီးရေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဘလော့ဂ် စာမျက်နှာသစ်မှာလည်း (ထောင်ကထွက်တဲ့ ပဌမနေ့) အကြောင်းကို ရေးသားပေးပို့ပြီးပြီလို့ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် ကိုဇာဂနာ သုံးသပ်ပြောကြားရာမှာ ( ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လကဖတ်ခဲ့တဲ့ ဂျာနယ်တစောင်ကိုဘဲ သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီတုံးက ဖတ်ခဲ့ရတာစာနဲ့အခုဖတ်ရတဲ့
စာနဲ့ဆိုရင်နဲနဲလေးပိုပြီး ရေးလို့ချောင်လာတယ်လို့ ကျနော်မြင်မိတယ်) ဟုပြောခဲ့သည်။
သို့သော် တချို့ကလည်း ရေးပြီးတော့ ဖျက်ရတဲ့ စာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါတွေကတော့ လက်ရှိ
စာနယ်ဇင်းသမား လုပ်နေသူတွေက ပိုပြီးတော့သိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာတဲ့
စာတွေအရ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်မဆိုးလှဘူး။ အရင်ကထက် လွတ်လပ်လာတယ်။ သို့သော် ဒီ့ထက်
ပိုပြီး ကျွန်တော်လွတ်လပ်စေချင်တယ်။ ဥပမာ-ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာမျိုးကတော့ ဖြစ်သင့်တယ်။
မြန်မာလူမျိုးနဲ့ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာနဲ့မတန်ပါဘူးဆိုတဲ့ စကားကိုကျွန်တော် လက်မခံနှိုင်ဘူး။ ဗမာ့ခေတ် တို့
မိုးကြိုး တို့တုံးကဟာတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ။ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာ တခုလောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်း
ပြည်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော့ကို လွတ်လပ်ခွင့်ရလို့ ကျွန်တော် ဝမ်းသာမိမှာ အမှန်ဘဲ။
လို့ဆိုပါတယ်၊ ဇာဂနာ ဘလော့ဂ် စာမျက်နှာမှာလည်း သူကိုယ်ရေး အတ္တုပ္ပတိကို ဆက်ရေးသွားမှာဖြစ်
ကြောင်းသိရပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကတော့ သူ့ရဲ့ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ (ဘီလူး)ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားနဲ့
(ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ)ဇာတ်ကားများ ပြန်လည်ပြသခွင့်ရရင် ကြည့်လိုနေကြကြောင်းသိရပါတယ်။
အခုတော့ သူ့ဘဝ သူ့အနုပညာအကြောင်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်မှာ ဆက်လက်ရေးသားသွားမယ်
ကျော်သီဟFIRST MUISE NEWS JORNAL. FRIDAY , 28 OCTOBER 2011. ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်...
ရွှေချာင်း ရေကြီးမှု့ကြောင့် ပခုက္ကူ ကျောင်းတိုက်တခု ပျက်စီးပျောက်ကွယ်။
အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရွှေချောင်းရေတိုက်စားမှု့ကြောင့် ပခုက္ကူမြို့ရှိ အေးငြိမ်းချမ်းသာ
ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာ ကျောင်းဆောင် အဆောက်အဦးများ၊ ရှစ်မျက်နှာစေတီနှင့် ကျောင်းတိုက်တို့ပျက်စီး
အေးငြိမ်းချမ်းသာ ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာ ပခုက္ကူမြို့၊ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိပြီး ကျောင်းမြေအကျယ်
ပေ၂၀၀ ပါတ်လည်ရှိကြောင်း၊ ချောင်းရေတိုက်စားမှု့ကြောင့် ၂ နာရီအတွင်း သာသနိက အဆောက်အအုံ
အကြီး၊ အသေး ၁၅လုံး၊ သစ်ပင်ပန်းမန်၊ရေတွင်းရေကန်များအားလုံးပျောက်ကွယ် ပျက်စီးခဲ့ရပြီး ကျောင်း
အေးငြိမ်းချမ်းသာကျောင်းတိုက်ကြီးတွင် ဆရာတော် ဦးပညာသာမိ နှင့် သံဃာတော်တပါး ရှင်သာမဏေ
၆ ပါးသီတင်းသုံးနေထိုငကြပြီး ချောင်းရေတိုက်စားမှု့ကြောင့် ကျောင်းတိုက်ကြီး ပျက်စီး ပြိုကျခဲ့သော်လည်း
ဆရာတော်နှင် သံဃာတော်များမှာ ဘေးအန္တရယ်မှ လွတ်ကင်းခဲ့ကြသည်။
သို့ရာတွင် ကျောင်း၏ ဝေယျာဝစ္စ ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ကိုရင်လူထွက် ကျောင်းသားများနှင့် ကိုရင်များ
၏ မိဘ ဆွေမျိုး ညီင်္အကိုမောင်နှမများ ချောင်းရေနှင့်အတူ မျောပါသေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့ကျောင်းတိုက်ကြီးချောင်းရေတိုက်စား မျောပါသွားခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ အလှူ့ဒကာကြီး ဦးလှအောင်
က (၁၀- နှစ်ကျော် ကြိုးစားပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ ၂ နာရီအတွင်းမှာ အကုန်ပျက်စီးသွားတယ်။
ဝိုင်းဝန်း ကြိုးစားပြီး မြေနေရာလေးနဲ့ ကျောင်းတဆောင်တော့ အမြန်ဆုံးပြန်လညိတည်ဆောက်ရမှာပေါ့)
ဟုပြေပြသည်။ရွှေချောင်း ချောင်းရေတိုက်စားမှု့ကြောင့် အေးငြိမ်းချမ်းသာကျောင်းတိုက်အပါအဝင် အိမ်
ထောင်စု ၃၅၀ အပိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး လူဦးရေ ၃၀၀ ကျော် ချောင်းရေနှင့်အတူ မျောပါသေဆုံးခဲ့ကြောင်း
မောင်တာPOPULER NEWS, FRIDAY 28 OCTOBER 2011.
မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာပညာရှင်များ အသင်း၏ နာယက ဦးသန်းတင်အောင်က ( ဗိသုကာပညာရှင်တယောက်
အနေနဲ့ပြောရရင် မြန်မာပြည်ကလူတွေရယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေ လေ့လာကြည့်ရှုဘို့ ဝန်ကြီးများရုံးကို
ပြတိုက်အနေနဲ့ထားသင့်တာပါ။ သမိုင်းမှတ်တမ်းအနေနဲ့ ပြထားသင့်ပါတယ် ) ဟုပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းသင့်သည့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ ၁၈၉လုံး ရှိသည့်အနက် ထိုဝန်ကြီး
ရုံးအဆောက်အအုံမှာ အဆောက်အအုံကြီးမားခြင်း၊ ပါတ်ဝန်းကျင် ကျယ်ပြန့်ခြင်း နှင့် သမိုင်းအစဉ်အလာကြီး
မားခဲ့ခြင်းတို့ ရှိသည့်အတွက်၊ထိပ်ဆုံးတွင် ရပ်တည်နေသင့်သည်ဟုပြောဆို၍ရကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ ပြုပြင် ထမ်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး လေ့လာစဉ် အခါကလည်း၊ မူလ
အစဉ်အလာအတိုင်း ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေး
တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည့် ၄င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုအဖွဲ့တွင် ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတဦးကလည်း နှစ်ကာလ ကြာမြင့်ခဲ့သည်နှင့်အမျှ ပျင်စီးယိုယွင်းမှု့
ရဂှိသည်မှာ မှန်သော်လည်း ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အနေဖြင့် တိတိကျကျ ပြော၍ မဖြစ်နှိုင်ကြောင်း၊ မိမိတို့အဖွဲ့
အနေဖြင့် ထိုစဉ်က ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းခဲ့စဉ် အမိုးအား ပဌမ ဦးစားပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ တံခါးနှင့် ပြူတင်းပေါက်
များကို ဒုတိယထားပြီး နောက်မှ ကြမ်းခင်းနှင့် အုတ်တိုင်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟုပြောသည်။
ထိုသုတေသန ပြုလုပ်ခြင်းကို ယမန်နှစ်ကထဲက ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် အစပိုင်းတွင် ပြီးစီးခဲ့
POPULER NEWS. FRIDAY, 28 OCTOBER 2011.
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကလေးငယ်အချို့အား တောင်းရမ်းခိုင်းစားနေသူ နှစ်ဦးအားဖမ်းမိ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင် ကလေးငယ်များအား နောက်ကွယ်မှ တောင်းရမ်းခိုင်းစားနေသူ နှစ်ဦးအား၁၁-၁၀-၂၀၁၁ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီး အရေးယူနှိုင်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
တောင်းရမ်းစားနေသော ကလေးငယ်များအား ဖမ်းဆီး၍ ကမာရွတ်မြို့နယ် နာနတ်တော လမ်းရှိ စောင့်ရှောက် ရေးစခန်းတွင် ထားရှိသော ကလေးငယ် ၃၀ ဦးအားစစ်ဆေးရာတွင် ၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးမှ ဒလမြို့နယ် ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ယောမင်းကြီး (၁) လမ်းရှိ နေအိမ်အား လိုက်လံပြသခဲ့သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခဲ့ရာ အဆိုပါနေအိမ်မှ အမျိုးသမီးတဦးသည် ဒလ ဘက်ကမ်းမှတဆင့် ကျောက်တံတနားမြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း မီးပွိုင့်တို့တွင် ကလေးငယ် ၃ ဦးတို့အားတာင်းရမ်းခိုင်းစားနေသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ဒလရဲစခန်းသို့ သတင်းပို့ကာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ ထို့နောက် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင်ကုန်သဘ်လမ်း နှင့် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း မီးပွိုင့်အနီးတွင် ခိုင်းစေခံရသည့် ကလေးငယ် ၃ ဦးနှင့်အတူ အမျိုးသမီးတဦးကို ထပ်မံ ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသည် အဆိုပါကလေးများထံမှ တနေ့လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀ နေ့စဉ်ယူပြီး၊ ကလေး
များမှ ပုံမှန် ချိန်းဆိုထားသောနေရာသို့ လာရောက် ပေးဆောင်ရကြောင်း ကျောက်တံတားရဲစခန်းမှ စစ်ဆေး
အဆိုပါ ကလေးများအား နောက်ကွယ်မှနေ၍ ကြိုးကိုင် တောင်ူရမ်းခိုင်းနေသူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးမှာ ဒေါ်သန်း
သန်းဦး(ခ)ဒေါ်မျိုး(၅၅)နှစ်၊(ဘ)ဦးဝင်းတင် နှင့် ဒေါ်တင်ညို(၄၅)နှစ်(ဘ)ဦးကြွယ် တို့ဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးစလုံးမှာ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒလမြို့နယ် ကျန်စစ်သားရပ်ကွက် ယောမင်းကြီး(၁)လမ်းတွင် အတူတကွ နေထိုင်သူများဖြစ်
ပြီး ယခုအခါ သူတို့နှစ်ဦးအား ကျောက်တံတားရဲစခန်းမှ ရဲအရေးမပိုင်မှု့ အမှတ်စဉ် (၃၂/၂၀၁၁)။ ကလေးသူ
ငယ် အက်ဥပဒေပုဒ်မ(၆၆) အရ စစ်ဆေးမှု့များပြုလုပ်ပြီး ထောင်ဒါဏ်(၁)နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ လူမှု့ဝန်ထမ်း ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်သိန်း
က ကလေးငယ်များနှင့်ပါတ်သက်နေသောအခြေအနေများကို အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က အစိုးရအဖွဲ့
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ကလေးငယ်များ တောင်ရမ်းစားသောက် နေထိုင်ခြင်းအား ထိမ်းသိမ်းစေါင့်
ရှောက်ရေး လုပ်ကိုင်နေသော NGO အဖွဲ့အစည်းတခု၏ တာဝန်ရှသူတဦးက ( ကလေးငယ်တွေကို အဓမ္မ
စေခိုင်းတဲ့ အခုလိုလူမျိုးတွေကို ဖမ်းမိတာကြားရတော့ ၀မ်းသာပါတယ်၊ လုပ်လဲ လုပ်သင့်တဲ့လုပ်ရပ်ပါ၊အခု
အစိုးရသစ်အနေနဲ့ ဆက်ပြီး အရှိန်ဟုန်မြင့် လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် ပပျောက်သွားမယ့် လက္ခဏာတခု
ပါ၊ ဒါပေမဲ့ ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဒ အဖွဲအစည်းမှာလည် ဟာကွက်မရှိဘို့လိုကြောင်း သုံးသပ်ပြော
Friday, 28 October 2011.POPULAR NEWS.
တရားမဝင် နေထိုင်ခဲ့ဘူးသူ မြန်မာ ၁၂ ဦးကို ကိုရီးယားလေဆိပ်မှ ပြန်ပို့ ခံရ။
ကိုရီင်္းယားလေဆိပ်ရှိ ပုံရိပ်ဖမ်းစက်ဖြင့် စစ်ဆေးရာမှ ၄င်းတို့နိုင်ငံတွင် တရားမဝင်နေထိုင်ခဲ့ဘူးသူ မြန်မာ
၁၀ ဦးကျော်ကို ပြန်ပို့ခံခဲ့ရကြောင်း အလုပ်သမား ညွန်ကြားရေးမှူးဌာနမှ ညွန်ကြားရေးမှူ့ချုပ် ဦးချစ်ရှိန်က
( Copunter web cam ) ရှေ့မှာ ရပ်လိုက်တာနဲ့ပေါ်တာဘဲ ကိုရီးယားကို နှစ်ကျော့ ပြန်ဝင်လာသူတွေနဲ့ တရား
မဝင် ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ ဘူးသူတွေဆိုရင် လေဆိပ်ကနေဘဲ ပြန်လွှတ်တယ် ဟု အလုပ်နှင့် ကိုရီးယားကို
သွားရာမှ ပြန်လွတ်ခံရသည့် ကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ ပြောပြသည်။ အဆိုပါစက်သည် စစ်ဆေးခံရသူ၏ မျက်
နှာ အရိုးတည်ဆောက်မှု့အနေအထား ကို စစ်ဆေးသောစက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီနှင့် အလုပ်သမားတို့အကြား ချုပ်ဆိုသည့်ဝန်ခံစာချုပ်တွင် အသက်
လိမ်ညာခြင်း၊ ကိုရီးယားတွင် တရားမဝင် နေထိုင်ခဲ့ဘူးခြင်း သို့မဟုတ် ပြစ်မှု့ကျူးလွန်ခဲ့ဘူးခြင်း အစရှိသော
အကြောင်းတခုခုကြောင့် ပြန်လည်စေလွတ်ခံရသည့် စည့်အချက်များနှင့်ငြိစွန်းခဲ့ပါက တရားဥပဒေအရ
အရေးယူဆောင်ရွကင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါအေဂျင်စီက ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားသည်။
၂၀၁၀ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှ ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ အဆိုပါအေဂျင်စီမှ ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့
မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သမား ၁၇၆၉ ဦး စေလွတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
ဘီလ်ကလင်တန် ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ဇာဂနာ သွားရောက် လေ့လာရန် စီစဉ်။
အမေရိကန်ရှိ ဘီလ်ကလင်တန် ဖောင်ဒေးရှင်း ( Clintion Global Initiative ) သို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်
နေကြောင်း ကိုသူရ (ခ) ဇာဂနာက ပြောသည်။ အဆိုပါ လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်နှိုင်ရန်အတွက် Passport ရရှိရန်လျှောက်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ဇာဂနာကပြောသည်။
ထို့အပြင်အရိုင်း၊ကင်းကောင်၊ငှက်ပျောကြော်တို့ က ၄င်းထောင်မှ မထွက်ခင်ကပင် စီစဉ်ထားကြသည့် အမေရိကန်တွင် ကပြမည့် ပွဲတပွဲကို ပါဝင်ကပြရန်လည်း စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာတဝန်း စီးပွားရေး၊ လူမှု့ရေး၊ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အကူကညီင်္ပေးရေးတို့ ကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ဘီလ်ကလင်တန်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာမည့် ဇာဂနာသည်အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်
နေ့ တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့် ဖြင့် မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်
လာသူတဦးလည်းဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ပြစ်ဒဏ် ၆၅ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး၊ ထောင်တွင်းတွင် ၃ နှစ်ကျော်
PN-108POPULER NEWS. FRIDAY, 28 OCTOBER
နော်ဝေ-မြန်မာ- အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ဆိုရန်။ ဧရာ ( အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ။ မြန်မာ -အင်္ဂလိပ်။ ဘန်းစကားများနှင့် စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံများ။
အင်္ဂလိပ်စာကို အသံထွက်သိချင်လျှင်။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ဆိုက်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်...
( Oslo ) T - bane /Trikk / Hovedbusslinjer / မြေပုံကြည့်ရန်http://www.trafikanten.no/no http://www.tbanen.no http://www.nor-way.no http://www.nsb.no/forside http://www.gotogate.no
ဦးနော အောက်မေ့ဘွယ်ရာ မြန်မာနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်။
ဓမ္မဟောင်း ဓမ္မသစ် ကျမ်းစာများ လေ့လာရန်။ မြန်မာခရစ်ယာန်လူငယ်များ။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ မြန်မာခရစ်ယာန်များ မိဿဟာယအဖွဲ့။
Myanmar X'MAX SONG ALBUM Myanmar Christian Radio
ခရစ်ယာန် ဓမ္မတေး စုစည်းမှု့ နေ့စဉ်ခွန်အား ရာခေလ၏ ငိုကြွေးသံ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်...
နေမင်းမောင်၏နည်းပညာပြန်လည်မျှဝေခြင်း။ IT-PAOH GROUP
ဖုန်းနှင့်ပါတ်သကသမျှ နည်းပညာ http://lwinminbo.blogspot.no/